माधव नेपाल भन्छन् : मैसँग यत्रो रिसइबी साध्‍ने स्थिति कसरी आयो होला ?- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
माधव नेपाल भन्छन् : मैसँग यत्रो रिसइबी साध्‍ने स्थिति कसरी आयो होला ?
'टार्गेट त मलाई बनाएको देखियो, केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन, प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन । मैसँग यत्रो रिसइबी साध्ने स्थिति कसरी भयो न्यायाधीशहरूलाई ? कसरी आइपर्‍यो त्यो स्थिति ?'
काठमाडौँ — पुस ५ यता नेकपा दुई समूहमा विभाजन हुँदा तत्कालीन एमालेका १२० सांसदमध्ये ४० जना दाहाल–नेपाल खेमामा छन् । यो साविकको नेकपाको कुल सांसद संख्याको ३३ प्रतिशतमात्रै हो । यो संख्याले नेपाल समूहलाई केपी ओली नेतृत्वको एमालेसँग विभाजित भएर अर्को पार्टी बनाउन दिँदैन ।
अर्को पार्टी बनाउने हो भने सांसदहरुको पद नरहन सक्छ । सर्वाेच्च अदालतले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको कित्ता छुट्याइदिएपछि माधवकुमार नेपाल र उनको समूहमा रहेका ४० जना सांसद सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनीहरूलाई ओलीसँग मिलेर जान राजनीतिक र छुट्टिएर अघि बढ्न कानुनी तथा प्राविधिक कठिनाइ छ । कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको संवादमा नेपालले के गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म सोचिनसकेको बताए तर अदालतको फैसलाले आफूलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा पारेको उनले प्रतिक्रिया दिए । नेपालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो त विचित्रको फैसला भयो त । यस्तो पनि हुन्छ ? पार्टी एक भएको छ । नाम फेर भन्नु एउटा कुरा हो । एकीकरण नै भएन भन्न पनि कहीँ मिल्छ ? दुइटा पार्टी अलगअलग निर्णय गरेर एकताबद्ध भए । एकताबद्ध भएपछि नाम मिलेन भन्नु एउटा कुरा भयो । एकीकरणको वैधतामा नै प्रश्न खडा हुन सक्छ ?
अदालतले फैसला नै गरिसकेपछि अब त्यसलाई मान्नुपर्छ होला नि त ?
न्यायिक हुन्छ होला नि त निरुपणका पक्षहरु । हामी कसरी अघि बढ्दा ठीक हुन्छ भनेर छलफल गर्दैछौँ । सरकारको वैधतामा त प्रश्न खडा भई नै हाल्यो । अदालतको फैसलाबाट यो सरकार त रहेन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार नै भएन भनेपछि यो कसको सरकार हो भन्ने प्रश्न खडा भयो ।
सरकारको विषयमा त नयाँ ढंगबाट कुरा चल्ने नै भइहाल्यो । सरकार हट्ने नै भयो, गिर्ने नै भयो । नयाँ समीकरणको कुरा होला । प्रचण्डजीको समूह त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ इन्ट्याक्ट । सबैभन्दा ठूलो समस्या त पूर्व एमालेभित्रको विभाजन हो । केपी अध्यक्ष भएर बसेकै मान्छे परे । अब यस विषयमा हामीले कानुनी हिसाब र राजनीतिक हिसाबले पनि छलफल त गर्नै पर्‍यो, सबै हिसाबले सोच्नै पर्‍यो । छलफल गरिरहेका छौं । अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
फैसलाअनुसार यहाँहरु एमालेकै सांसद/नेताको हैसियतमा रहनुभयो नि त ?
त्यही त त्यसको के–के असर पर्छ आकलन गर्न सकिने अवस्थै रहेन । हिजो राष्ट्रियसभाबाट जितेकाहरु एमाले पनि होइनन् । वेदुराम भुसालजी कुन पार्टीको त अब ? प्रतिनिधिसभामा विजयी विद्या भट्टराई कुन पार्टीको ? उपनिर्वाचनबाट स्थानीय तहमा आएकाहरु कुन पार्टीको ? समस्या त खडा भयो नि हैन ?
अनि तपाईंचाहिँ कुन पार्टीको ?
समस्या खडा भयो नि हेर्नुस् न ।
अब के गर्ने सोच्नुभएको छ ?
हामी छलफलमै छौं । कानुनी राजनीतिक हिसाबले छलफल र परामर्श गरेर अघि बढ्छौँ ।
अदालतको फैसलाको सिधा अर्थ, तपाईंकै प्रस्तावमा एमाले संसदीय दलका नेता चुनिएका केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठक र पार्टी कमिटीको बैठकमा यहाँहरु जानुपर्छ भन्ने नै हो नि त, नत्र कारबाही होला नि ?
कारबाही गरुन् न त । को डराउँछ र ?
यहाँहरूले पार्टी विभाजन गर्ने नै हो भने पनि तपाईंको पक्षमा ४० प्रतिशत पनि सांसद छैनन् । अर्काे पार्टी बनाउने हो भने पनि यहाँहरुलाई प्राविधिक र राजनीतिक दुवै कठिनाइ पनि त होलान् ।
त्यही त गाह्रो भो ।
अदालतको फैसलापछि साविकको एमालेमै पनि तपाईंको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो परेको हो ?
हो । सबैभन्दा अप्ठ्यारो मलाई नै पऱ्यो । किन यस्तो भयो होला ? यो त विचित्रै भयो । जुन चिजमा प्रवेश नै नगर्नुपर्ने किन यस्तो गरेको होला ? के हो ? टार्गेट त मलाई बनाएको देखियो हेर्नुस्, केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन, प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन । मैसँग यत्रो रिसइबी साध्ने स्थिति कसरी भयो न्यायाधीशहरूलाई ? कसरी आइपर्‍यो त्यो स्थिति ?
यस्तै अवस्था आइलाग्ला भन्ने सोच्नुभएको थियो त ?
मैले त सोच्दै नसोचेको कुरा भयो । यो ढंगको निर्णय त कसरी होला र ? कसरी होला र भन्नेमात्रै लाग्थ्यो के । पहिले केपीले संसद् कसरी विघटन गर्लान् र भनेजस्तै नै भयो । म चकित छु, फैसला अझै पढ्दैछु । तर आजको दिनमा त अदालतको फैसलाअनुसार यहाँहरु एमाले त हो नि त हामी बस्छौँ बसेर छलफल गर्छौं ।
आज त तपाईं र दाहालको पार्टीको स्थायी कमिटीको वैधता छैन नि, के भनेर बैठक बस्ने ?
राजनीतिक रुपमा बस्न सकियो नि ।
एमालेको बैठकमा जाने सम्भावना कति छ ?
हामी पहिले बस्छौं । त्यसपछि के गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा निर्णय हुन्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:४५
दीपेन्द्रको पहिलो शतक
काठमाडौँ — उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीको शतक र पवन सर्राफको ५ विकेटको प्रदर्शनले पनि नेपाल पुलिस क्लबले विभागीय प्रतिस्पर्धी एपीएफ क्लबसँगको हार जोगाउन सकेन ।
एपीएफविरुद्ध शतक बनाएपछि पुलिस क्लबका दीपेन्द्रसिंह ऐरी । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर
दीपेन्द्रले घरेलु क्रिकेटमा पहिलोपल्ट शतक बनाए, तर उनको टिम पुलिसले एक विकेटको हार बेहोर्‍यो । त्रिवि मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको पुलिसको इनिङ्समा दीपेन्द्रको एकल प्रदर्शन रह्यो । उनको १ सय ४० रन मदतमा पुलिसले २ सय ५८ रन बनायो । चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका दीपेन्द्रले इनिङ्सको अन्तिम बलमा आउट हुनुअघि १ सय ३१ बलमा ११ चौका र ६ छक्का प्रहार गरे । पुलिसबाट सुनील धमलाले ३३, पवन सर्राफले ३५ र अनिल साहले १८ रन जोडेका थिए । जवाफमा एपीएफ कप्तान शरद भेषावकरले अन्तिम बलअघि छक्का प्रहार गरी काठमाडौं मेयर कप राष्ट्रिय एकदिवसीयमा टोलीलाई लगातार दोस्रो जित दिलाए । तेस्रो नम्बर ब्याटिङमा आएका शरद १२ रनमा खेलिरहँदा ह्याम्स्ट्रिङ समस्याका कारण ‘रिटायर्ड हर्ट’ भए । ‘मिस्टर फिनिसर’ बाट परिचित शरदले पछि क्रिजमा गएर टिमलाई जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । उनी २० रनमा अविजित रहे ।
यसअघि ओपनर सुवास खकुरेल र सन्दीप जोराको संयमित अर्धशतकमा एपीएफ सहज स्थितिमा पुग्यो । सुवासले ओपनर आसिफ शेखसँग पहिलो विकेटमा ६७ रनको साझेदारी गरे । उनले ७९ बलमा ६ चौकासहित ५० रन बनाउँदा आसिफले ४२ रन जोडे । सन्दीपले ६५ बलमा ६१ रन बनाए । उनले २ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे ।
४५ औं ओभरमा २२७–६ को सहज स्थितिमा रहेको एपीएफ तीन ब्याट्सम्यान (अमरसिंह राउटेला, भुवन कार्की र वसन्त रेग्मी) आउट भएपछि ४७ ओभरमा २४०–८ को अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि अविनाश बोहरा छक्का र चौकासहित १२ रन जोडेर आउट भएपछि अन्तिम ओभरमा एपीएफलाई जितनिम्ति ४ रन आवश्यक भयो । र, कप्तान शरदले खेलको आकर्षक अन्त्य गरे ।
लगातार जितपछि एपीएफको फाइनलयात्रा बलियो बनेको छ । शनिबार उद्घाटन खेलमा एपीएफले आर्मीलाई १ विकेटले हराएको थियो । ‘लगातार जितले हाम्रो उत्साह बढेको छ । यही लयलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्नेछौं,’ कप्तान शरदले भने । उनले दीपेन्द्रको इनिङ्सको प्रशंसा गरे । पुलिसका कप्तान मन्जित श्रेष्ठले राम्रो खेल्दाखेल्दै हार बेहोर्नुपरेको बताए । ‘यो पिचमा राम्रो रन बनिरहेको थियो । हामीले २ सय ७० देखि ८० रनसम्म बनाउन सकेको भए जित्ने थियौं । बलिङमा पनि हाम्रो तालमेल मिलिरहेको थिएन,’ उनले भने ।
मूलपानीमा सन्दीप चम्किए
युवा स्टार सन्दीप लामिछानेले विष्फोटक ब्याटिङसहित अलराउन्ड प्रदर्शन गरेपछि मूलपानी मैदानमा काठमाडौं मेयर–११ ले वाग्मती प्रदेशलाई ९४ रनले हरायो । टस हारेर ब्याटिङ गरेको काठमाडौं मेयर–११ का शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यानहरू असफल रहे पनि पुछारक्रमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै २४४–९ को योगफल बनायो । १३ ओभरमा ४३–५ को कठिन स्थितिमा पुगिसकेको मेयर–११ को इनिङ्स सिद्धान्त लोहनी र सन्दीप रजालीले छैटौं विकेटमा ७१ रनको साझेदारी गरेका थिए । सिद्धान्तले ३४ र सन्दीप रजाली ३३ रनमा आउट भए ।
कप्तान सन्दीप लामिछाने र सौरभ खनालले आठौं विकेटमा ५७ रनको साझेदारी गरे । विस्फोटक ब्याटिङ गरेका सन्दीपले २० बलमा ६ छक्कासहित ४२ रन जोडे । विपिन खत्रीले सौरभसँग नवौं विकेटमा ६० रनको साझेदारी गरेपछि मेयर–११ सम्मानित स्कोरमा पुगेको थियो । विपिनले ३२ रन बनाए । सौरभ ४९ रनमा अविजित रहे ।
जवाफमा वाग्मती प्रदेशले ३४.३ ओभरमा १ सय ५० रनमात्र बनाउन सक्यो । राष्ट्रिय टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल (१७), पूर्वकप्तान पारस खड्का (१०) सस्तैमा आउट भएको खेलमा पृथु बाँस्कोटाले ६० रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । अन्यले अपेक्षाकृत रन बनाउन सकेनन् । काठमाडौंका सन्दीप लामिछानेले ३ विकेट लिए । म्यान अफ द म्याच उनले ९ ओभरमा ४० रन खर्चिए । विपिन खत्री र अनिल खरेलले २–२ विकेट लिए । लगातार दुई हारपछि वाग्मतीको फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा गम्भीर धक्का लागेको छ । शनिबारको पहिलो खेलमा ७३ रनको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा वाग्मतीले पुलिससँग २ रनको हार बेहोरेको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:४४
'निर्वाचन नगर्न दलहरूले संविधान र कानुनको छिद्रता खोजिरहेका छन्'